Filohan'ny Emirates Sir Tim Clark: adihevitra momba ny kandidà mandritra ny fotoana mahaliana
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Filohan'ny Emirates Sir Tim Clark: adihevitra momba ny kandidà mandritra ny fotoana mahaliana
Sir Tim Clark filohan'ny fiaramanidina Emirates
Ny valanaretina COVID-19 dia mitohy ho eo an-tsain'ny tsirairay na inona na inona asa na vanim-potoana iainany, ary ny vokatra eran'izao tontolo izao dia miovaova hatramin'ny fahatezerana hatramin'ny saika voafehy. Ahoana no fomba andikan'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena ireo fironana mihetsiketsika be dia be ireo ary manao drafitra handrosoana?
Hitanay ireo firenena naka toerana somary mampihoron-koditra momba ny fidirana sy ny dia iraisam-pirenena.
Tsy ho hitantsika ny fiverenan'ny fahafaha-manao amin'ny sehatra nantenaintsika volana vitsivitsy lasa izay.
Raha tsy manidina fiaramanidina isika dia tsy mahazo vola. Ny zaza manan-janaka telo dia afaka mahazo izany vola izany haingana.
Sir Tim Clark, filohan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Emirates, dia niara-nipetraka tamin'i Peter Harbison avy amin'ny CAPA Live ho an'ny fifanakalozan-kevitra mazava, araka ny nambarany - nandritra ny fotoana mahaliana. Ity manaraka ity dia dika mitovy amin'ny dinika nataon'izy ireo.
Andriamatoa Tim, andao isika hanomboka amin'ny sary lehibe, izay ijoroantsika amin'izao fotoana izao amin'ny masonao. Talohan'ny nanombohantsika dia nanao aho… Talohan'ny nahatongavanay dia nandinika aho fa toa misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny mombamomba ny risika, ny fandeferana amin'ny risika azon'ny firenena sasany atao, ohatra, ny Ny faneken'i Etazonia, toa tsy dia misy olana loatra, fahafatesan'olona 4,000 isan'andro, kanefa ny indostria dia mandroso miaraka amin'ny fahafaha-manana 50%. Mifanohitra amin'i Shina, izay tena voafehy, zavatra voafehy, saingy nandritra ity taom-baovao Sinoa ity, ny taom-baovao, dia tena namepetra tokoa izy ireo, na dia vitsy aza ny tranga tany Chine. satria tian'izy ireo hotehirizina izany. Noho izany, misy ity karazana laharana tandem ity raha mandroso amin'ny fitomboana sy mitazona ny toekarena ianao, sa tena voafehinao ny areti-mandringana? Ary mazava ho azy fa tsy valiny eny / tsia tsotra. Fa ahoana no fahitanao an'ity fantsom-panazavana ity izay misy fiantraikany aminao ao amin'ny Emirates, indrindra amin'ny maha mpitatitra iraisampirenena madio fanjakana misy governemanta an-jatony maro hiatrehana izany?
Mazava ho azy fa mijery azy isanandro isan-tanindrazana isika, ary afaka mahita araka ny notononinao ara-drariny, fomba fiasa samy hafa, emperitra samihafa momba ny fandehan'ny firenena amin'ny fifehezana izany na fandanjana [tsy henoina 00:02:33] miaraka amin'ny toekarena fanokafana, et cetera. Saingy amin'ny ankapobeny, hiteny aho fa raha mijery… Noteneninao i Etazonia, ny fijerena an'i Eoropa, ny fijerena an'i Oceania, ny fijerena an'i Amerika atsimo, afrika, ny fironana dia ny mifehy aloha, mametra lava kokoa, ary avy eo misokatra rehefa misy ny refy soso-kevitra fa hihatsara ny raharaha. Ary tao anatin'izay 48 ora lasa izay dia nahita firenena naka toerana somary drakoniana momba ny fidirana sy ny dia iraisam-pirenena isika. Indrindra indrindra omaly dia ny Fanjakana Mitambatra miaraka amin'ny lalàna napetraka momba ny quarantine. Mbola lavitra kokoa aza i Ekosy. Hitanay i Kanada manafoana ny asany any Amerika Avaratra sy amin'ny toerana hafa. Ary mitohy izany.
Izany rehetra izany dia tarihin'ny zava-misy fa tamin'ny fahavaratry ny taona lasa dia nieritreritra isika fa nandalo azy io, nieritreritra isika fa manana dian'ity virus ity, ary avy eo nahazo ny mutation nivoaka avy any Afrika atsimo, na koa ny United Kingdom ary Brezila. Ary manaporofo izy ireo fa sarotra kokoa ny mandray an-tanana, [tsy henoina 00:03:41] mahazo fahatakarana izy ireo amin'ny alàlan'ny filaharana genomika ny fomba hiatrehany ireo virus ireo, hanohy hanidy ny sisintaniny ireo firenena. Hanasarotra ny fiainana izany amin'ny dia iraisam-pirenena. Ary rehefa niresaka farany tamin'ny volana desambra isika dia mieritreritra aho fa nilaza fa somary manantena aho fa amin'ny fahavaratra amin'ity taona ity, '21, nomena fa ny panacea dia toa ny fandaharan'asan'ny fanaovana vaksiny, ny zavatra nampanahy ahy fotsiny dia ny fomba iray ara-drariny sy ara-dalàna hivoahana amin'ny faritra rehetra amin'ny jeografia ny planeta, dia ny fahafahantsika miditra amin'ny karazana restart misy dikany amin'ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena amin'ny fahavaratra amin'ity taona ity.
Averiko indray, ny zavatra hitanao sy ny fomba fijerin'ny firenena manoloana izay ilaina, ny fitsarako izao dia haharitra ela kokoa noho ny noeritreretiko azy. Ary heveriko fa hahita fahasarotana kely angamba isika. Tsy ho hitantsika ny fiverenan'ny fahaiza-manao amin'ny ambaratonga antenaiko tamin'ny Jolay sy Aogositra. Heveriko fa mety ho tamin'ny telovolana farany tamin'ity taona ity.
Eritreritra sarotra izany. Ny tiako holazaina dia, raha ny fahitan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, mazava ho azy fa tena voajanahary tokoa ny te hiverina miverina, indrindra rehefa mandany vola ianao, ary izany no zava-misy amin'ireo faritra maro amin'ny indostria. Ny tiako holazaina dia ny firesahana fotsiny tamin'ny eropeana sasany tamin'ny volana lasa teo dia mbola izany ny fihetsika tao. Mila manidina indray isika. Mila mamaky an'io isika. Na izany aza, izaho, miombon-kevitra amiko dia mitovy amin'ny fametrahana ny sarety alohan'ny soavaly. Tokony hofehezinao ny zavatra alohan'ny hahafahanao mamantatra mialoha fa hanomboka haka toerana voafaritra ho azy ny governemanta. Noho izany, tena antsasaky ny taona farafahakeliny izahay, angamba telo ampahefatry ny taona miala amin'izany, araka ny fahitanao azy.
Heveriko, araka ny nolazainao tsara, niverina nifehy ny fiparitahana ny fifantohana. Ny fifehezana ny viriosy miditra amin'ireo firenena mihitsy. Averina ankehitriny ho toy ny imperative izany. Arovy ny anao, amin'ny alàlan'ny axioms an'ny governemanta britanika, NHS, hamonjy ain'olona, ​​ireo zavatra hafa rehetra. Raha teo aloha ny resaka… dia noresahiko toa an'i Boris Johnson, fa hanao fialantsasatra isika amin'ny volana martsa, aprily, na inona izany. Niova mazava izany izao. Raha ny marina, nandeha tamin'ny lalana hafa izy ireo. Ka, mazava ny porofo. Tsy misy dikany ny manandrana mieritreritra fa handeha hiasa amin'ny ambaratonga nantenainay isika. Soa ihany aho fa eo amin'ny sehatry ny fiaramanidina manidina isika. Raha tsy manidina fiaramanidina isika dia tsy mahazo vola. Ny zaza manan-janaka telo dia afaka mahazo izany vola izany haingana.
Ny olana dia ny orinasam-pitaterana an'habakabaka sy ny sehatra aerospace rehetra mifandraika aminy ary izay rehetra hafa efa nanana herintaona tamin'io, ary talohan'izy ireo… Tamin'ny herintaona dia nieritreritra ny olona fa, iray, hisy farany ny fahitana, roa, izy ireo mameno ny vola takiana amin'ny tsy fandidiana amin'ny alàlan'ny fanomezana trosa na amin'ny fanampiana avy amin'ny fanjakana na inona izany, amin'ny fotoana ahafahan'izy ireo mamakivaky, azo antoka fa amin'ny telovolana voalohany amin'ity taona ity. Tsy izany no nitranga. Toa mbola hitohy ela kokoa io. Ary, noho izany, hitanao ny kiakiaka am-po, avy amina orinasa marobe ao amin'ny indostrianay, ary koa ireo mpilalao ao amin'ity orinasa ity milaza hoe: “Hihazakazaka haingana dia haingana isika. Tokony ho azonao izany. ”
Ary tsy hitako, ankoatr'i Etazonia, ny fanampiana manokana an'ny sehatra, vola, izay mila miditra amin'ireo orinasa tena tsara, tsy misy maharatsy ny maodelin'izy ireo, tsy misy maharatsy ny zavatra nataony taloha. Raha tsy manana mpandeha izy ireo, dia tsara ho ahy, ahoana no ahavitanao… Ary heveriko fa hanana ny governemanta isika, rehefa tafita amin'ny fahatairana izy ireo amin'ny fidirana amin'ny fiarovana sy fifehezana, hiatrika an'io manokana izy ireo olana amin'ity sehatra ity.
Ny zavatra resahinao any, Tompoko, dia tena miharihary fa lalina kokoa noho ny zotram-piaramanidina, sa tsy izany? Heveriko fa ny zavatra manahirana ahy kely, indrindra amin'ireo mpitatitra sasany any Etazonia, ireo mpitatitra lehibe any Etazonia, dia, araka ny filazanao, hatramin'izao, dia efa noheverinay fa raha mitazona ny fofonaintsika mandritra ny fotoana lava isika, isika Hiverina indray aho ary afaka manomboka miverina amin'ny ara-dalàna ny zava-drehetra, indrindra amin'ny vaksininy. Tsy izany no izy. Tsy hitranga izany. Heveriko fa nifanaraka tamin'izay ianao. Ary vokatr'izany, raha tokony hanandrana mivoaka amin'ny rivotra madio miaraka amin'ilay maodely taloha nanananao taloha ihany ianao, dia ilaina ve ny tena mijery fotokevitra lehibe fa tsy amin'ny fiaramanidinao fotsiny… miresaka anao aho, izaho miresaka momba ny orinasam-pitaterana an'habakabaka amin'ny ankapobeny, ny maodelin'ny zotram-piaramanidina ary ny rojom-panomezana iray manontolo, ny fifandraisan'ny mpampindram-bola, ny OEM ihany, zavatra tena ilaintsika ve, amin'ny maha-indostria azy, horesahina izao? Ahoana no ahitantsika ny ho avy izay miharihary fa tsy hitovy amin'ny taloha?
Raha ny hevitra farany nataonao dia mametraka ny fanontaniana izy hoe: inona ny indostria, manao ahoana ny toekarena manerantany aorian'ny areti-mandringana? Ary misy sekolim-piheverana samihafa momba an'io, Peter, ary ny tsirairay amin'ireo sekoly ireo dia hamolavola izay heverinao fa tokony hataonao izao. Raha manana ny fomba fijerinao ny mpiorina.
Ianao dia manana ny fomba fijerin'ny mpampivelatra, izay eo am-pelatanantsika ala kokoa. Izahay dia mihevitra fa mila mandamina olana be dia be ianao, olana, olana izay nahavariana anao hatry ny ela. Niresaka momba ny rojo famatsiana ianao. Niresaka momba ny fifandraisana amin'ireo mpampanofa tena ianao, amin'ny banky, amin'ireo orinasa mividy ny orinasanay, izay mety ahazoana tombam-bidy bebe kokoa noho ny tokony ho izy. Ary manana fotoana hipetrahana ianao ary hieritreritra ny fomba hanatsaranao ny fomba fitantanana ireo lafiny manokana amin'ny orinasanao, fa tsy voatery hanao ny asanao amin'ny fomba hafa amin'ny maodelin'ny orinasam-pandraharahana.
Ary eny, marina tokoa ny anao, misy ny vintana ao. Saingy amin'ny faran'ny andro, ny fahitako azy dia rehefa tafita amin'ity isika dia hiverina ny fangatahana dia lavitra, hiverina ny fahatokisan'ny mpanjifa. Mety ho voalamina kely kokoa amin'ny heviny fa mety ho hendry kokoa amin'ny zavatra tena tadiaviny ny olona. Ny fanirian'izy ireo dia hitovy, fa ny fomba ahazoany ny hetaheta dia mety ho hafa kely. Nanam-potoana hieritreretana bebe kokoa izy ireo. Tsapan'izy ireo fa afaka mitohy amin'ny fomba hafa ny fiainana, ary mety hisy fiatraikany amin'ny fangatahana izany. Tsy dia fantatro loatra izany. Ny fotoana ihany no hiteny.
Saingy tsy azoko antoka fa izao no fotoana mety hanombohana mieritreritra raha mifanaraka amin'ny tanjona ny raharaham-barotrao. Raha toa ka mety tsara alohan'ny areti-mandringana io dia mety ho mety amin'ny valan'aretina post post. Raha nisy olana lehibe teo alohan'io dia tsy misy antony tokony hanomezana tsiny ny areti-mandringana noho ny tsy fahombiazanao. Mbola hitranga ihany izany, angamba izao aloha kokoa fa tsy aoriana.
Ka ireo orinasa nanana modely tena tsara, manan-karena, mahasoa alohan'ny areti-mandringana, tsy hitako ny antony maha samy hafa azy ireo amin'ny fomba fahitana ny vokariny eny an-tsena. Mety ho hendry kokoa izy ireo. Mety hahomby kokoa amin'ny fomba fanaovan'izy ireo izany. Azon'izy ireo natao ny nampihatra ny teknolojia niomerika somary lavitra kokoa noho ny teo aloha. Ho afaka izany fantaro ireo faritra sarobidy ireo afaka manatsara ny orinasa izy ireo. Isika rehetra dia nanana fotoana hipetrahana sy hanaovana izany. Ary be dia be ny asa mandeha any Emirates, rehefa miresaka izahay momba izay azontsika atao amin'ny resaka fifandraisana BTC sy ny fomba hitantananay ny rojom-panolanana ao amin'ny orinasa. Tsy mampaninona ahy izany. Ny tena mahaliana ahy dia ny fahafahan'ireo indostria ireo mitovy amin'ny toe-javatra misy antsika, na ny sarany ambany na ny antonony na ny halavirana lava na ny serivisy feno, izay tsy nahazo ny loharanom-bola hiatrehana ny fidiram-bola miditra.
Ary misy adidy hiantohana fa haharitra ity sehatra ity, ary tsy ilaina ny manahy momba ny fanampiana avy amin'ny fanjakana na hoe iza no mahazo. Voalohany, andao handeha izy. Ataovy salama sy mihetsika hatrany izy io. Tena zava-dehibe amin'ny toekarena manerantany, ary miatrika ny ambiny aorian'izany.
Ary koa, ny iray dia manahy kely ny amin'ny famatsiana, ny sehatry ny aerospace, na propulsion izany, na amin'ny famokarana. Nahita toe-javatra nahatsiravina vitsivitsy izahay, ohatra, tao Boeing vao tsy ela akory izay, nanampy ny olana Max izay nananan'izy ireo. Azo antoka fa taona ratsy io, saingy tsy ny Boeing an'izao tontolo izao tokony hanahirana antsika na ny Airbus. Io no rojo famatsiana ao amin'izy ireo. Ilay mpivarotra seza, mpanamboatra [tsy henoina 00:12:25], ireo indostria kely manome kojakoja, fantson-drano, na inona izany na inona. Rehefa manamboatra ny fiaramanidina ianao dia miankina betsaka amin'ny…… Raha tsy manana ny vola izy ireo dia hanana olana amin'ny fananganana fiaramanidina na dia mety hiverina aza ny fangatahana.
Noho izany, fanontaniana iray ny fitantanana an'ity toe-javatra sarotra fatratra ity, entin'ny vola mihoatra ny zavatra hafa rehetra, ary manandrana mamakivaky izany.
United Airlines may: Denver-Honolulu UA328
Hotely voalohany nampidirina tao Washington DC: Hotel Wormley